၁၀ ရက်အတွင်းကားမသွင်းခြင်းအတွက်ပြစ်ဒဏ်။ ကျနော်တို့ CoAp ကိုကြည့်ပါ။ ... အပိုဒ် ၁၂.၁ ။ သတ်မှတ်ထားသောနည်းအတိုင်းမှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိသောယာဉ်မောင်း၊ နိုင်ငံတော်နည်းပညာကိုမကျော်လွန်သောယာဉ်မောင်း ...
ဗီဇထုတ်ဖို့ဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲ။ ကားအတွက်ရှေ့နေကဘာလဲ။ ထိုအခါဝယ်ထို့နောက်မှတ်ပုံတင်ရန်နိုင်လိမ့်မည်နည်း ယုံကြည်မှုဟာတစ်ထောင်အတွင်းမှာပါ။ ပြီးတော့သင်ယုံကြည်မယ်ဆိုရင်သူဟာသူမနဲ့အတူအရာရာကိုလုပ်နိုင်ပါတယ်
အပိုင်းအစအဘို့အကားတစ်စီးငှားဖို့ဘယ်လို? "မော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၏ရပ်စဲ" ။ မော်တော်ယာဉ်သည်ပိုင်ရှင်လက်ထဲတွင်ရှိမနေသော်လည်းစွန့်ပစ်ခြင်းနှင့်စွန့်ပစ်ခြင်းမရှိပါကဤလုပ်ဆောင်မှုကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်။
ခေါင်းစဉ်မိတ္တူပွားလျှင်ငါကားတစ်စီးကိုဝယ်ခြင်းနှင့်ပါဝင်ပတ်သက်သင့်သလား အခြားအရာအားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်။ အဘယ်ကြောင့်ပုံတူကိုစစ်ဆေးရမည်နည်း။ gibadede မှာငါတို့ရှုံးနိူင်တယ်ငါတို့အချိန်တုန်းက PTS ပုံတူမတူဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ...
ယခုမည်သို့ ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းခြင်းဖြစ်သနည်း။ မှာ။ ကားလား ယခုကားသည်မှတ်ပုံတင်မှပယ်ဖျက်ခြင်း (မှတ်ပုံတင်ခြင်းစည်းမျဉ်းများပြောင်းလဲခြင်း) နှင့်ဒေသသည်အရေးမကြီးပါ။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်မော်စကိုတွင်ကားတစ်စီး ၀ ယ်နိုင်သည်။
အမေသည်သူ၏သားအတွက်ကားကိုပြန်လည်မှတ်ပုံတင်လိုသည်။ နှစ် ဦး စလုံးလှူဒါန်းမှု, ဝယ်ယူခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းအတွက်နှစ် ဦး စလုံးပိုမိုအကျိုးအမြတ်အောင်ဘယ်လို။ ဒါမှမဟုတ်ဘာလဲ ??? ပိုကောင်းတဲ့ပိုက်ဆံ။ သို့မဟုတ်ရှေ့နေချုပ်မကြာခဏဆိုသလို ... မကြာခဏမေးခွန်းပေါ်လာသည်။
နံပါတ် ၅၅၅၊ ၇၇၇ သို့မဟုတ်ယခုမော်စကိုတွင်မည်သည့်ပေါင်းစပ်မှုရှိပါသလဲ။ မည်သည့်စီးပွားဖြစ် MREO ကိုမဆိုသွားပါ။ Cool LLC, RAA, OMM, OOM နှင့်ကြွင်းသောအရာသည် dudes အတွက်ဖြစ်သည်။
ကားဟောင်း ၀ ယ်ရန်မည်သည့်စာရွက်စာတမ်းများလိုအပ်ပါသလဲ။ သင်၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်သည်မေးခွန်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်အမြဲတမ်းမေးသင့်သည်။ သင့်ကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမြဲတမ်းရှိပါကသင်ကားကြိုက်နှစ်သက်ပြီးယာဉ်ထိန်းရဲများနှင့်အတူယာဉ်ထိန်းရဲနှင့်တွေ့သည်။
ကားရောင်းဝယ်မှုစာချုပ်ကိုရပ်စဲလို့ရမလား။ သင်ကားအသစ်မယူခဲ့ပါ၊ သင်ကိုယ်တိုင်မစဉ်းစားပါကသင်တွေးမိပြီးရောဂါရှာဖွေခြင်းအတွက်ဝန်ဆောင်မှုဌာနသို့ဖုန်းဆက်ပါ။
ကျွန်တော်အသေးစားအတွက်ကားတစ်စီးကိုမှတ်ပုံတင်လို့ရနိုင်မလား။ ချုံကိုရောင်းရန်လိုအပ်သည့်အခါသူ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုသူထံမှ“ သိမ်းဆည်း” လိုက်သောကြောင့်အုပ်ထိန်းသူဌာန၏သဘောတူခွင့်ပြုချက်လိုအပ်လိမ့်မည်။ အသက် ၁၄ နှစ်မှစ၍ သင်လုပ်နိုင်သည်။ သင်မလုပ်နိုင်ပါ။ သင်လုပ်နိုင်သည် ...
အပိုင်းအစတစ်ခုအဘို့အကားတစ်စီးကိုချွတ်ဖို့ဘာလိုအပ်သလဲ? သင်၏နံပါတ်များကိုပယ်ဖျက်ပြီးပါပြီ၊ PTS၊ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်နှင့်သင်၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နှင့်အခြားအရာအားလုံးသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ယာဉ်ထိန်းရဲအားကားမပေးနိုင်ပါ။
ကားတစ်စီးရောင်းသည့်အခါကျွန်ုပ်လက်မှတ်အဘယ်ကြောင့်လိုအပ်သနည်း။ မည်သည့်အချိန်တွင်မည်သူဆွဲယူသနည်း။ ကျွန်ုပ်သည်ကားတစ်စီးရောင်းနေပါသည်၊ မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မျှလက်မှတ် - ငွေတောင်းခံစရာမလိုပါ။ DCT (၀ ယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်) ကိုလက်မှတ်ထိုးရန်လုံလောက်ပါသည်။
စာရွက်စာတမ်းမရှိဘဲမော်တော်ဆိုင်ကယ်ကိုမည်သို့မှတ်ပုံတင်ရမည်နည်း။ ဟုတ်တယ်၊ ပြproblemနာမရှိဘူး ... မင်းလာပြီးပြောတယ် ... ငါမော်တော်ဆိုင်ကယ်ကိုမှတ်တမ်းမတင်ဘဲစာရင်းသွင်းရမယ် .... ထိုအခါသင်သည်ဝမ်းနည်းခြင်းအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်ခံရလိမ့်မည် (မဟုတ် ...
ဂျပန်အကောက်ခွန်ဂဏန်းတွက်စက်များမှကားများ၏အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းရေးကုန်ကျစရိတ်အပြည့်အဝ bullshit ။ Sun သည်အကောက်ခွန်ဥပဒေကိုဆုံးဖြတ်သည်။ အင်ဂျင် ၁၀၀၀ ကုဗမီတာအထိရှိသည်။ စင်တီမီတာမှ ၃ နှစ်အထိယူရို ၈၅၀၀ အထိကုန်ကျနိုင်သည်။
အဘယ်ကြောင့်အနက်ရောင်ဖယောင်းတိုင်? မကောင်းတဲ့ဓာတ်ဆီသို့မဟုတ်ချွတ်ယွင်းဖယောင်းတိုင်သိုက် Soot ။ ခြောက်သွေ့သောကျပ်ခိုးများသည်လေနှင့်လောင်စာရောနှောမှုသို့မဟုတ်နောက်ကျလောင်ကျွမ်းခြင်းကိုဖော်ပြသည်။ misfiring၊ ခက်ခဲသောစတင်မှုနှင့်မှားယွင်းမှုကိုဖြစ်စေသည်။
အဆိုပါ VAZ 2114 ၏တိုးမြှင့်လောင်စာဆီသုံးစွဲမှု! အခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာအာရုံခံကိရိယာလွင့်ထွက်သွားနိုင်သည်။ ဖြစ်နိုင်သမျှ! အဲဒါကြောင့်အမြဲတမ်းဖွင့်နေတယ်။ ))) တင့်ကားကိုကြည့်ပါ - ယိုစိမ့်မှုရှိလား ???
ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ - "မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်အရကားတစ်စီးရောင်းတာကနှစ်ဆဖြစ်ပြီးမှတ်ပုံတင်ကနေဖယ်ထုတ်မခံရဘူး" ။
ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ - "မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်အရကားတစ်စီးရောင်းတာကနှစ်ဆဖြစ်ပြီးမှတ်ပုံတင်ကနေဖယ်ထုတ်မခံရဘူး" ။ မဖြစ်နိုင်ဘူး မေးခွန်းကိုမှန်ကန်စွာရေးဆွဲပါ။ သင်ပြောသကဲ့သို့သင်ကားတစ်စီး ၀ ယ်ခဲ့သည် ...
ကားတစ်စီးအားပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ရန်ဘယ်လောက်ကျပါသလဲ ??? ရူဘီ ၅၀၀ မဟုတ်ဘူး။ ကော်မရှင်ကြေးသည်ရူဘီ ၁၀၀ ခန့်ဖြစ်သည်။ + မှတ်ပုံတင် - ၂၅၀၀ ခန့်၊ အာမခံ ၄၀၀၀ ဆိုလျှင်အာမခံ + MOT ...
အခြားသူတစ် ဦး အတွက်ကားပြန်လည်ထုတ်ပေးရန်အတွက်မည်သည့်စာရွက်စာတမ်းများလိုအပ်သနည်း။ ကားအတွက်စာရွက်စာတမ်းများ (ခေါင်းစဉ်နှင့်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်)၊ ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းသဘောတူညီချက်၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်းမပြုရန် MREO သို့လျှောက်လွှာ၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ...
ငှားရမ်းခြင်းကားအဘယ်နည်းကားတစ်စီးငှားရမ်းခွင့်ကိုနားလည်ပုံ။ ငှားရမ်းခြင်းသည် "lick to" ကြိယာမှနာမ်ဖြစ်သည်။ ငှားရမ်းခကိုကားဝယ်ခြင်းဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ အိမ်ငှားခမှာကားတစ်စီးဝယ်လိုက်တာကမင်းကိုဆိုလိုတာက ...
81 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,817 စက္ကန့်ကျော် Generate ။